Ongororo yeHondo yeVakafa - Game Point - Bhodhi Mitambo uye Vhidhiyo Mitambo
Firimu razvino raZack Snyder rave kuwanikwa paNetflix kubva Chishanu. Takatarisa chiitiko che zombie naDave Bautista naMatthias Schweighöfer. Iwe unogona kuverenga pazasi kana "Hondo Yevakafa" yakakosha.
Zombie chiratidziro nekutanga matambudziko
"Hondo Yevakafa" ine genesis yakaoma kwazvo. Kubva 2004, mushure mekunge Snyder apeta remake yake ye "Dawn of the Dead". Iyo firimu dzimwe nguva yakawanda, dzimwe nguva isingashande mukugadzira. Panguva iyoyo, akapiwa kutungamirirwa kwefirimu ye "Army of the Dead", iyo yaakamboramba nekuda kwezvimwe zvirongwa. Makore mashomanana gare gare pfungwa yacho yakazarurwa zvakare uye muna 2010 vakatoratidza murume ari pachigaro chemutungamiriri mu "The Thing" mugadziri Matthijs van Heijningen Jr.
Mushure mokunge hapana chakauya zvakare, pakutanga hapana zvakawanda zvakanzwika kubva ku "Hondo yevakafa". Asi muna 2019, Netflix yakazochengetedza kodzero dzaimbobatwa naWarner uye yakasaina Zack Snyder yekutungamira, script uye kamera basa. Asi ikoko kwakanga kusiri kuguma kwedambudziko refirimu racho. Mushure mekupedzwa kwekutora firimu, Chris D'Elia, uyo aimbova chikamu chevatambi, akatarisana nemhosva dzekushungurudzwa pabonde. Ndosaka hunhu hwake hwakatsiviwa nemutambi Tig Natora uye zviratidziro zvake zvakapfurwa zvakare vachishandisa miviri miviri uye zviratidziro zvegirinhi.
Kana firimu richiitwa mumamiriro ezvinhu akadaro, kazhinji haisi shumo yakanaka. Asi kutarisira chikamu chemhedziso. Iwe hauone kusikwa kwakaoma kweHondo yevakafa. Kunyangwe zvibodzwa zvakapfurwa neTig Natory zvinokwana zvisingaite mumufananidzo wakazara uye Snyder akakwanisa kugadzira inoyevedza chiitiko chiratidziro kunyangwe paine dambudziko. Kuitwa kwekuona kunonyanya kufadza. Pano unogona kuona zvakajeka zvinyorwa zveSnyder. Ndiani anongoti ane hunyanzvi hwekuona zvinokatyamadza zviitiko zvezviitiko. Kunyanya kana iwe uchifunga kuti Hondo Yevakafa yaive nebhajeti yakaderera ye90 miriyoni emadhora kune blockbusters. Zombie-infested Las Vegas, yakagadzirwa naSnyder, inogara ichitaridzika zvakanaka.
Zombie Firimu rinosangana neHeist Movie
Mushure mekunge Las Vegas yakasvibiswa ne "Patient-Zero" uye yakazara neZombies pakutanga kwefirimu. Kana Mauto eUS akabudirira kuvhara kunze kweguta nechivharo chemidziyo uye nekudaro iine denda re zombie. Izvi zvinoratidzwa mune yakabudirira montage umo ma zombies akatanga kupararira zvisingaite muguta. Nepo vashoma vagari veguta vakamira neshungu kuti vazvidzivirire kuti vatenge nguva yakakwana yekuti mauto avhare. Mifananidzo iri kubuda yakawanda ye phatos uye inoperekedzwa ne "Viva Las Vegas" remix naRichard Cheese naAllison Crowe.
Imwe nguva gare gare, chiitiko chaicho chefirimu chinotanga. Kana hurumende yeUS yafunga kubvisa dambudziko re zombie nehondo yenyukireya. Muridzi wekasino Bly Tanaka (Hiroyuki Sanada) anohaya mauto anotungamirwa naScott Ward (Dave Bautista) kuti adzore mazana maviri emamiriyoni emadhora kubva muvhavha yekasino yake nguva isati yakwana. Pamusoro pekumanikidza kwenguva, pane chokwadi dambudziko diki rekuti kune uto reundead pakati peScott nemari. Kuti ave tenzi uyu, anotora timu ine mavara akasiyana-siyana.
Flat mavara ane yakawanda chemistry
Pamusoro peshamwari dzake dzekare Maria Cruz (Ana de la Reguera) naVanderhohe (Omari Hardwick), anohayawo mutyairi weherikoputa anotuka Marianne Peters (Tig Notaro) uye weGerman Tressor-Knacker Dieter (Matthias Schweighöfer). Mauto anotenderedzwa nemamwe mavara anopenga anonyanyo ziva kuuraya zombies, pamwe nenyanzvi yezvekuchengetedza yaTanaka Martin (Garret Dillahunt). Pakupedzisira, mwanasikana wake Kate (Ella Purnell) anopinda muchikwata ichi achipokana nekuda kwaScott.
Haufanire kutaura zvakawanda nezvevatambi vega. Nekuti iwo manhamba anotorwa 1 kusvika 1 kubva pachiito kit. Asi iri harisi dambudziko, sezvo firimu risingadi kutora vatambi vechokwadi kana vakadzama. Schweighöfer's character Dieter anoita seanerdy comic zororo nemoyo uri panzvimbo chaipo. Zvinoratidza zvakare uyezve kuti anogona kuridza mhere semusikana. Iyo yehondo-yakaedzwa Vanderhohe inoratidzwa nekuti iye anofarira kukanda pasi pehuzivi makotesheni uye dzidziso. Uye pakati peScott naKate hukama hunoratidzika kunge hwakaoma baba-mwanasikana hunotangwa, hunoputswa ne3-4 nhaurirano.
Asi hapana chimwe cheizvi chakakosha zvikuru. Nekuti unogona kuudza vatambi kuti vakanakidzwa pane seti. Iyo chemistry pakati pemunhu wese anobatanidzwa yakanakisa uye izvi zvakare zvinoendeswa kune vateereri. Dave Bautista kunyanya anoratidza kugona kwake zvakare uye anopenya mune mashoma emanzwiro emufirimu. Sezvakangoita panguva yezvisingaverengeki zvezviitiko.
Dzimwe nguva zvishoma zvakanyanya
Pamusoro pezvakawanda zvakanaka, "Hondo Yevakafa" inofanirwawo kugamuchira mashoma mapoinzi ekutsoropodza. Saka zvimwe zvinofadza zvinotorwa chete kuti zvigozvidonhedza zvachose, kana kuti kwete kupedza kugona kwavo. Semuyenzaniso, senge muI'm Legend naWill Smith, maZombi anomiririrwa sevanhu vakangwara vane manzwiro. Zvichipesana nekumashure kwekuenderera mberi uye sezvo chiri chinhu chakakosha chechirongwa, ndinogona kuregerera kuti chirevo ichi hachina kushandiswa zvizere. Asi izvi hazvishande kune mamwe mazano anofadza.
Zvinokurudzirwa kuti mukana wehutachiona hwe zombie unoshandiswa sechombo chekuisa vanhu mujeri rezvematongerwo enyika. Asi nei izvi zvakadaro, kuti zvinoitwa sei uye ndiani anobatwa nazvo. Hazvizokurukurwa zvakadzama mune imwe nzira yefirimu. Pane kudaro, zvimwe zviitiko mufirimu zvinotarisa pane zvisingakoshi zvachose sub-plot umo Kate anoedza kusunungura shamwari kubva kuLas Vegas. Shamwari yakakomberedzwa neZombies inoita sekukurudzira kwavo. Asi izvi zvingadai zvakavambwa zvakasiyana pasina kuisa mari skrini pane iyi sub-plot.
Muchidimbu, iyo firimu ingadai yakazvichengetedza iyi pfungwa dzisina kufanira uye zviitiko. Pamwe kuomesa nguva yakati rebei. Kana kupa mavara zvishoma kudzika uye kumashure.
"Hondo yeVakafa" chiitiko chiratidziro chinogona kugonesa nechiito chakanyatsorongwa uye chinooneka chinokatyamadza. Kana iyo firimu haidi kumanikidza kupokana kwevanhu se "The Walking Dead". Achiri kuda kumisa chiitiko chinoshamisa senge mu "Dawn of the Dead". Iyo firimu inokwanisa kupa vateereri chaizvo zvinotarisirwa neaction fan muma nibbles ari nyore kugaya. Pasina kuita satire alá "Zombie Land". Chinhu chose chakapetwa ne zombie-yakajairika splatter uye mashoma akajeka maficha. Chiito uye zombie mafeni anogona kuiwana pasina matambudziko. Vamwe vese vanozoona mushure memaminitsi gumi nemashanu ekutanga kuti firimu nderavo here kana kuti kwete.
Kare Mushure meBitcoin, Shiba Inu, Safemoon uye Co - ikozvino kunouya Mari yeMitambo
Inotevera Gadzira yako wega yekubhejera kuhwina zano
Zvinotyisa pachinzvimbo chekuita: Kupfura kweiyo Resident Evil firimu kwapera
Sky Ticket uye Sky Calendar: Nyowani nhevedzano uye mafirimu aNdira 2021
Vagadziri veHitman vanoshanda pamutambo wevhidhiyo wakavakirwa paJames Bond